Ogeysiis: Kutub Cusub oo ka Hadlaya Taariikh Nololeedkii Dr Maxamed Siraad Doolaal – Rasaasa News
Aug 31, 2009 Dr. Dolal, Jwxo, ONLF
Waxaa la Ogaeysiinayaa dhamaan dadweynah Somalida Ogadeeniya, in uu soo bixi doono buug ku saabsan wax qabadkii halgame Dr. Maxamed Siraad Dolal. Halgamaagu wuxuu sanadkan bilowgiisii ku shahiiday dhulka Somalida
Ogadeeniya, isaga oo ku jira hawlaha halganka, ee ay horseedka ka tahay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], taas oo uu ka mid ahaa aas aasayaasheedii.
Dr. M.S.Dolal, oo ahaa N/hure caan ah, in badana ku soo dhex jiray halganka xornimodoon ee ay ku jirto ummada Somalida Ogadeeniya, kaas oo ay ummadu ku doonayso in ay ku hesho Aayo ka tashigeeda. Dr.Dolal, ayaa ka qayb qaatay saddexdii Jabhadood ee ka hana qaaday carada Somalida Ogadeeniya midba in uu ka qaatayba, kuwaas oo la galay gumaysiga Itobiya dagaalo uu dhiig badan ku daatay, aduun badan uu ku lumay, balse ayna wali fari ka qodnayn.
Waxaan hubnaa in dad badan oo ka mid ah Somalida Ogadeeniya oo meelo badan oo aduunka ah kala jooga, in ay aqoon dheer u lahaayeen Dr. Dolal, waxaa kale oo jira dad badan oo ay halganka isku barteen, si ay u kulmeenba. Sidaas daraadeed waxaanu soo dhawaynaynaa cid alaale cidii nagala qayb qaadan karta taariikhda nololeedka iyo wax qabdkii Dr. Dolal, oo aan hubo in uu ahaa Astaanta halganka Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana Jabahada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo].
Dr. Dolal, waxaa uu Ogadeeniya ka qoray qoraalo mihiim ah, kuwaas oo u badan qormooyin [articles] iyo baadhis [research], waxaa kale oo uu qoray buug mihiim ah oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ku saabsan taariikhda halgan ee Ogadeeniya, saamayntii Ogadeeniya ee ka ganacsiga dadka [slave trade], sidii ay ku soo gashay diinta masiixiga iyo tan Islamka, nolosha Ogadeeniya iyo waliba Ilbaxnimadii Ogadeeniya diimaha ka hore. Kuli waxaa ay ku qoran yihiin Kutub uu ka qoray Ogadeeniya xiligii uu ku jiray baadhista wax barashadiisii ugu dambaysay.
Dr. Dolal, waxaa uu ka tagay buug daadsan oo aan wali la daabicin, isaga laftigiisuna u baahan in la daabaco, kutubtani waxay hanti u yihiin halganka iyo taariikhda ummada Somalida Ogadeeniya, hadii Eebe raali ka noqdo oo aanu helo kharajka Madbacada, wuxuu kutubkani la soo bixi doonaan, kutubka aan haatan gacanta ku hayno.
Waxaa laga yaabaa in mid uun aad aqoon ugu lahayd Dr. Dolal sida; dhinaca caruurnimadiisii, Waxbarashadiisii, Bulshonimadiisii, Siyaasadii halgan ee uu soo galay iyo daryeelka qoysnimo,
wax alaale wixii aad ka taqaanay kaga qayb qaado, qoraal aad soo dirto.
Hadii aadan jeclayn in uu magacaagu ka muuqato boggaga mahad celinta iyo tixraaca ee Kutubka midna, fadlan ku soo sheeg qoraalka aad noo soo dirayso.
Fadlan, ha fudaydsan in aad wax ku dartid taariikhda halgan ee Dr. Dolal, oo noqon doonta mid ay ubadkeena iyo umadeena aan wali gaadhin goolkii ay higsanayeen u isticmaalaan wax qabad ay ka duulaan kolka ay daba socdaan xaqooda duudsan ee ay ku dabo socdaan gumaysigan Itobiya.
Taariikh la,aan waa tacab la,aan
Guddiga Raad Reebka Taariikh nololeedkii Dr. Maxamed Siraad Dolal Dolal [GRRT]